SingForYou.net - Achit So Tae Aya Thar
Achit So Tae Aya Thar
Tags : အချစ်ဆိုတဲ့အရသာ
By : ayoelay on May 27, 2010
Score: 109 Rating: 4.95 Comments: 24
Achit So Tae Aya Thar's Description
အချစ်ဆိုတဲ့အရသာ ခြင်ထောင်ထဲ ရောက်မှသိ ဆိုသတဲ့။ ကျွန်တော် တော့မသိလိုက်ပါဘူး ဒီမှာ ခြင်ထောင်မှမရှိတာ... သိတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများရှိ ရင် ပြောကြပါ အုန်း..ဒီသီချင်းထဲမှာတော့ ကြာလာရင်ခါးတယ် တယ်...အဲဒီလိုဆိုတော့ အစပိုင်း က ချိုသလား ချည်သလား ဆိုတာ သိချင်လိုက်တာ ဗျာ...
aungtun1 on May 28, 2010 0
another brilliant and outstanding singing of you,,,,,like your vocal.......so nice to listen,brother ayoelay yay ......5***********************************
Love is somewhat liked whiskey.. it smells great, tasteabit bitter sweet.. and sometime wonderful.. kinda complex andamixture of all sorts.. that you could ever image.. btw, ko)ayoelay, you sing well here.. all*&cheers!
susannyunn on May 28, 2010 0
မတိတေးတာတောင်ဂလောက်ကောင်းးးးနေတာ :P တိရင်တော့လားးးးး :D ဟားဟ:))))))))))) ရှယ်ဂျီးပဲဝေးးး :atb ဘရိုဂျီး အတားလေးရေ ဘရာဗိုဗိုဗိုပါ >>>>>>>
အရမ်းကြိုက်တဲ့သီချင်းပါနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ~~ အားပေးသွားပါတယ် bro ayoelay ရေ~~****း)
wow.. really nice bro *****
ayoe yay..sing taing kg tal..:D*****
bro yay sing thwar dar kg mha kg pal :Dachit so dar ka tawt ချို ချဉ် ငန် စပ် lo par pal :P cha noe gal lay arr payy thwar par dal *******
ဟဟဟ..ဘယ်သူပြောတာတုန် bro ရ အဲဒီအဆိုစကားလေးက. ဦးပေါ်ဦးကတော့ အချစ်ဆိုတဲ့အရသာက နိဗ္ဗာန်အရသာနဲ့အတူ တူပဲလိုတော့ပြောသွားတာပဲ..:P>>အရမ်းနားထောင်လို့ကောင်း တယ်ဗျာ...:atb:clap>>5***************for bro.
bro ayoelay...arr pay twr tal nor...kal belaso kg tal..*****
:O>>:O Eal Bar par Lane???Achit so te aya thar??aheeee:P:))))Bro g yoe layy...thichin lay ko pine pine ng ng so twer tar ayan kggg par shinttt:***************bravoo bro g>>
အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်ရှင် ... ***** :)
အချစ်ဆိုတဲ့အရသာသိချင်နေတဲ့ဘရားးရေ..ပီကယ် သာဝယ်စားကြည့်ဗျာ..ပြီးရင်..စာဖွဲ့လိုက်..ဟီးးးးးးး အာပေးသွားပါတယ်...အေးအေးလေးနဲ့မိုက်နေတယ်. ရဲဖမ်းမယ်နော်..သတိထားဦးးဟီးးစတာပါ..ကောင်းမြဲ ကောင်းဆဲပါပဲဗျာ..**********:)
mrcastle on May 27, 2010 0
အရမ်းကောင်းတဲ့ သီချင်းလေးပါ ဘရီုရေ ။ ဆိုသွားတာလဲ ပါဖတ်ထ်ပါပဲ ။ သီချင်းနားထောင်ရင်း အချစ်ရဲ့အရသာအား မျက်လုံးကလည်ကလည်နှင့်စဉ်းစားသွားပါကြောင်း :)
ဒီတပုဒ်လည်းအရင်က သီချင်းတွေလိုပဲ ကောင်းမြဲကောင်းဆဲပါလား....................**********************************4u nor
arr par pay del good par tal shint bro yay % 5********************
thuranaingwin on May 27, 2010 0
KiddY-EML on May 27, 2010 0
bro yay yann mite tel 5********
bro ayoelay yayaxo yawatan ka kg p tar pel arr pay nar sin thwar par tel shin********4u......:)))))
ahlwan69 on May 27, 2010 0
အကို နဲ. ဒီလို သီချင်း မျိုး လိုက် တယ်။ အား ပေး နေ တယ် နော်။
a chit so taeaya thar bal lo nay lal hinnn...sumyar tog lwan nay ya tal...heehee.....kg tal bro ayoelay yay...sumyar ka first comment pop naw..
sumyar ကျေးဇူးပါ ပျောက်ချက်သားကောင်းနေပုံထောက်တော့ အချစ်ရဲ. အရသာများ လိုက်ရှာနေ ရော့လား :P